Orinasa mpamatsy solika tena ilaina ny mpamatsy sinoa Moringa tsara indrindra | HaiRui
BOTOTRA, TROMA, fitoeran-javatra fitaratra, fonosana namboarina
Voantsinapy manaitra. Irritant
Liguida mavo maivana
Fitsaboana, hanitra sy zava-manitra, kosmetika sy chmeicals,
Fanondroana refraktika ::
Gravity manokana @ 25 ° C:
Drum Fiber 1,25kg miaraka amina harona plastika roa sosona 2. Amponga GI 50 net / 180kg harato. 3. Ho takian'ny mpanjifa.
Ny menaka ambioka moringa dia menaka maivana manaparitaka ary mora mandray ao anaty hoditra. Ny otrikaina A, B, C, E, asidra matavy tsy miangona sy asidra palmitoleic, oleic ary linoleic dia manome ny toetra mahavelona sy mahavelona azy. Ny Menan'ny Voa Moringa dia misy antioxidant 1.700 ary raisin'ireo manam-pahaizana ho iray amin'ireo "menaka fanatsarana tarehy lehibe indrindra hita hatramin'izay". Noho ny haavony
ny fatran'ny antiseptika sy anti-inflammatoire, ny Moringa Seed Oil dia manampy amin'ny fampihenana ny fisehoan'ny tsipika sy kentrona tsara ary ampiasaina hanadio sy hanasitranana ny hoditra. Izy io dia heverina ho tsara indrindra amin'ny fampiharana fanorana sy aromatherapy. Ny menaka dia mahita fampiharana amin'ny vokatra marobe ao anatin'izany ny crème anti-antitra, vokatra fikarakarana volo, savony sy fanasana vatana, crème de face, ranomanitra ary deodrant.
Ny menaka voa moringa dia manampy amin'ny famelomana ny tarehy sy ny tarehy hoditra
Rano mavo madio
Kilasy fitsaboana ho an'ny kosmetika, fitsaboana, sakafo
Manitra manitra manokana
Fanorana, kosmetika ho an'ny fikolokoloana ny hoditra, diffuser, fanafody
ny menaka voantsinapy dia mety amin'ny pepole mahazatra, ireo Marary voan'ny hyperlipidemia, hypertension, mararin'ny aretim-po, tsy fahazotoan-komana dia mety amin'ny fanjifàna.
1. Manana ny vokatry ny sakafo matsiro, afaka manatsara ny fahazotoan-komana
2. Misy fiasa mahery vaika. Ka ny salmon manta sy ny hazan-dranomasina hafa dia matetika misy voantsinapy
3. Mba hisorohana ny fahasimban'ny nify, homamiadana, fivontosana ny rà. Manana fiantraikany sasany amin'ny fitsaboana ny asma
4.Mba hisorohana ny kolesterola avo, ny tosidra ambony, ny aretim-po, mampihena ny viscosity amin'ny rà
5. ao amin'ny vatana, menaka manja no menaka fanorana tsara
Menaka Moringa Ho an'ny hoditra
Menaka Moringa Virjiny
Vidiny menaka voa Cardamom be
Sakafo azo hanina voankazo voajanahary voajanahary azo hanina ...
100% ranon-tsolika hops voajanahary
Menaka castor mangatsiaka 10ml 50ml 500ml 25kg
Menaka ilaina amin'ny famoahana lanja mavesatra ...